"कोरोना आतंक र प्रतिरोधका उपायहरू" - शैली न्युज
२५ जेष्ठ २०७८, मंगलवार २१:३९
भेषराज पोखरेल, बिराटनगर ।
न सरकारले सोच्यो न हामीले सोच्यौं यति भयावह अवस्था आउला भनेर ! यो त शुरूवात मात्रै जस्तो छ, अझै कति विकराल अवस्था आउने हो ? हिजोसम्म निर्धक्क भएर मलाई केही हुन्न भन्नेहरूको पनि ओठमुख सुक्न थालिसकेको छ मेरो जस्तै ।
म कोरोना प्रतिरोध गर्न सक्षम छु भनाउँदोको पनि मन स्थिर छैन । एउटा अदृश्य डरले पुरै मस्तिष्कलाई लथालिङ्ग बनाइ दिएको छ।
कल्पनानै नगरेका आफन्त र साथीभाइहरूको अकाल अनि भयानक अन्त्यको खबरले परिस्थिति विकराल नै भइ सकेको अनुभूत गराउन थालेको छ ! बरु म आफू संक्रमित हुँदा यति डराएको थिइनँ जति दिनहुँ छापिने मृत्युका कठोर प्रहारहरूको समाचारहरूबाट डराएको छु !
आफूलाई आइपर्ने दुर्घटनाको आभासले भन्दा पनि समाजमा भइ रहेको दुर्घटनाको त्रासले मन आक्रान्त हुन पुगेको छ। नसम्झिन खोज्दा पनि बाध्य छु युरोप र अमेरिकाको आततायी नरसंहार अनि सामुहिक चिहानका डरलाग्दा परिदृश्यहरू हेरेर ।
म चिकित्सा क्षेत्रको विशेषज्ञ त होइन नै तर मेरो अनुभवजन्य परामर्शले समाजमा आशाको किरण छर्न सक्छ भन्ने कुरामा शतप्रतिशत विश्वस्त छु। कोरोनाले कुनै पनि मानिसमा प्रवेश गरेपछि शुरुको द्धरट दिन नाक र घाँटीलाई मात्रै आफ्नो आश्रय स्थल बनाउने रहेछ। यो अवधिमा कसैमा सामान्य लक्षण देखिने, कसैमा लक्षण नै नदेखिने र कसैमा जटिल लक्षण पनि देखिने हुँदो रहेछ।
यदि शुरुवाती ट दिनभित्र हामीले वरदान स्वरुप प्राप्त गरेको घरेलु जडिबुटीको भरपुर उपयोग गर्न सक्ने हो भने कोरोनाको असर कमिलाको टोकाइ बराबर पनि नहुने रहेछ। तर जब शुरुवाती दिनमा हामी लापर्वाह हुन्छौ र मलाई केही भएको छैन , यो जाबो कोरोनालाई त म यत्तिकै पचाइ दिन्छु भन्ने दम्भले दबाउन खोज्छौँ तब हामी आफ्नै चिहान खन्ने काममा लाग्दा रहेछौँ।
मानिसहरूको दर्दनाक अन्त्यको प्रमुख कारण पनि शुरुवाती दिनमा देखिएको सामान्य अवस्थामा आवश्यक सजगता अपनाउन नसक्नु हो भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यो रोगले फकाइफकाइ मानिसलाई मृत्युशैय्यामा पुर्याउने रहेछ।
यसर्थ विज्ञानको दबदबालाई समेत तुच्छ प्रमाणित गर्न सक्ने, संसारकै सर्वशक्तिमान मानिएको प्राणीलाई नै कायल पार्न सक्ने कोभिड ज्ञढ को पहिलो आक्रमणलाई नै निस्तेज पार्नु हाम्रो जीवनरक्षाको निर्विकल्प उपाय हो।
– तिर्खा लाग्दा या नलाग्दा जुनसुकै बेला पनि मनतातो भन्दा अलि बढी तातोपानी नै पिउने बानी बसालौँ।
– आँखा पोल्ने, दुख्ने, बिझाउने या सामान्य असजिलो अनुभव मात्रै भएमा पनि तातोपानी९खाने कपुर, असुरोको पात, तुलसीको पात र नून सहित० को वाफ दिनमा कम्तीमा ३ पटक नियमित लिने गरौँ।
– खाने कपूरलाई धूलो पारी सफा कपडामा बेरेर जुनसुकै बेला नाकबाट गन्ध लिइ राख्ने गरौँ।
– दिनमा ४/५ पटक एउटा टिम्मुर र एउटा मरिच मुखमा राखिराख्ने बानी बसालौँ !
– काँडापानी बनाउँदा सक्खर९गुण०, तुलसी, ज्वानो, जिरा, दालचीनी, टिम्मुर, र अदुवाको प्रयोगलाई अनिवार्य बनाऔं।
-कोरोनाको आतंक रहुन्जेल चिसो पानी या अन्य चिसो पेय पदार्थको प्रयोग गर्नु भनेको मृत्युसँग मितेरी गाँस्नु सरह हो भन्ने कुरालाई गम्भीर रूपमा मनन गरौँ।
यति मात्रै विधि अपनाउन सके पनि हाम्रा आफन्तले हाम्रो आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्नु पर्दैन। हाम्रा फोटाहरूले अखबार र सामाजिक सन्जालका भित्ताहरू रङ्गिने छैनन्। कोरोना लागेपछि म धेरै पैसा खर्च गरेर बाँचिहाल्छु नि भन्नेहरूलाई पनि उनीहरूले कमाएको अथाह धनराशिले बचाउन सकेको पाइएन। प्रकृतिले हामीलाई कोरोनाको विरुद्ध सजिलै लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक उपायका लागि सहस्र स्रोत दिएको छ। यी स्रोतहरूको नियमित उपयोग गरौँ र सबैलाई उपयोग गर्न उत्प्रेरित गरौँ।
पोखरेल, सामाजिक अभियान्ता तथा शिक्षासेवी हुनुहुन्छ ।
सन् २०२१ मा विश्वको आर्थिक वृद्धि ५.६ प्रतिशत रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण
कर्णाली प्रदेशसभा बैठक आजपनि बस्ने